प्रविधी खबर Archives - Page9of9- www.kchhakhabar.com
नोकिया ३३१० को मूल्य ३ लाख !
बजारमा पुनरागमन गर्न लागेको ऐतिहासिक नोकिया ३३१० को मूल्य ४९ युरो अर्थात् झण्डै ५५ सय रुपैयाँ पर्ने जानकारी यो फोन सार्वजनिक हुँदाको दिनमा गराइएको थियो । तर नोकिया ३३१० बजारमा आउँदा केवल ५५ सयको फोन मात्र आउने छैन । तपाइँले ३ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने यस्तै मोडेलको फोन पनि किन्न सक्नुहुनेछ । वास्तवमा उक्त बहुमुल्य फोन विश्वको सबैभन्दा कडा धातुले लेपन गरेको हुनेछ । नोकियाले आफ्नो ऐतिहासिक फोन ३३१०...
आइतबार, फाल्गुण २२, २०७३
फोन काट्ने बानी छ ? हटाई हाल्नुहोस् : तपाइलार्इ जेल सजाय पनि हुन सक्छ !
के तपाईंको फोन काट्ने बानी छ रु छ भने अब बानी बदलि हाल्नोस् नत्र मोबाईल कामै नलाग्ने गरी बिग्रन सक्छ । त्यतिमात्र हैन, तपाईंले फोन काट्नु भएमा कानुनी झमेलापनि ब्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । International Hand Phone User’s Association (IHPA) ले यो घोषणा गरेको हो । बिभिन्न देशका मोबाईल उत्पादक कम्पनी तथा त्यहाँको सरकारबिच यस बिषयमा गंभीर छलफल चलिरहेको (IHPA) ले जनाएको छ । गतस...
शुक्रबार, फाल्गुण २०, २०७३
ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? ज्यान जान सक्छ..
एजेन्सी । प्रविधिको युगमा मोबाइल एक अत्यावश्यक वस्तु बनेको छ । ट्वाइलेट वा बाथरुममा हुँदा फोन प्रयोग गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । यदि तपाईमा पनि यस्तै बानी छ भने अब त्यसो नगर्नुहोस् । ट्वाइलेटमा बसेका बेला गेम खेल्ने, च्याट गर्ने वा फोनमा बोल्ने गर्नु स्वास्थ्यमाथी खेलवाड गर्नु हो । यस्तो बानीले मृत्यु पनि हुनसक्छ । बाथरुम वा ट्वाइलेमा मोबाइल प्रयोग गर्ने बानीले गम्भिर रोग निम्त्याइरहेको विशेषज्ञह...
बुधबार, फाल्गुण ०४, २०७३
पोखरामा आठौं सूचना प्रविधि तथा मोबाइल मेला हुने
पोखरा, फागुन ३ । कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल महासङ्घ कास्की र पोखरा इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको आयोजनामा बिहीबारदेखि पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा आठौँ सूचना तथा प्रविधि र मोबाइल मेला हुने भएको छ । यही फागुन ५ देखि ८ गतेसम्म हुने मेलाको उद्देश्य सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका नेपालमा भित्रिएका नवीनतम प्रविधिका बारेमा जानकारी गराई सूचना तथा प्रविधिका विकासमा योगदान पुर्...
फेसबुकमा बसेको माया ले यसरी अमेरिका पुर्याएपछि…
सन् २०१५ मा दक्षिण कोरियाको सुदुर दक्षिण क्षेत्रको सामुन्द्रीक तट स्थित खजे शहरमा वसेको आधा वर्ष भन्दा धेरै बितिसकेको थियो। पानीजहाजका पाइप र पुर्जा जोडदै थिए। दैनिक जसो दस देखि चौध घन्टासम्म हुने निरन्तर शारिरिक श्रमले ज्यान अति नै थाकेको हुन्थ्यो। बिदेशमा आएपछि काम नगरि सुखै छैन। एकदिन आइतबार थाकेर लखतरान भइ पल्टेको थिए। एक अपरिचित युवतीको सन्देश आयो। ‘हेल्लो हाउ आर यु?’ कहिल्यै नचिनेकी युवतीको ...
मोवाइल र इन्टरनेट विना कसरी लेख्छन सिके राउतले ट्वीट ?
हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले मोबाइल चलाउन दिँदैन । तर,राज्य विरुद्ध संगठित अपराध गरेको आरोपमा १० दिने थुनामा रहेका सिके राउत निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार पोखिरहेका छन । राउतले इन्टरनेटमार्फत् आफ्ना विचार राखिरहेका छन् । उनको ट्वीटर एकाउण्ट घण्टा घण्टामा अपडेट भइरहेको देखिन्छ । गत, बिहीबार जनकपुरबाट पक्राउ परेका राउतलाई राति नै सिराहा ल्याएर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत सि...
झण्डै दुई लाख मूल्यको छाता, हावामा उडेर जोगाउनेछ पानीबाट
के तपाईंलाई पानी पर्दा छाता बोकेर हिँड्न झन्झट लाग्छ ? यदी लाग्छ भने सम्झनुस अब तपाईंका दुखका दिन चाँडै सकिनेछन् । तर, मोटो रकमको जोगाड गरिराख्नुस । तपाईं जस्ताको सुविधाका लागि आउन लागेको छ, ड्रोन छाता । यो छातालाई हातले समाइराख्नु पर्दैन । यसले आफैं टाउको माथि-माथि उडेर पानीबाट जोगाउँछ । सेमी-अटोनोमस ड्रोनको मद्दतले यो छाता बनाइएको हो । यसले प्रयोगकर्ताको चाललाई ट्र्याक गरेर भिज्नबाट बचाउँछ । ...
बिजुलीबिनै स्याटेलाइट च्यानल हेर्छन् केन्याका यी बासिन्दा
मध्य केन्याको मबीयामा आफ्ना दुई बच्चा र श्रीमतीसँग बस्छन् स्टेनली गिकान्यो । यो इलाकामा बिजुलीको तार पुगेको छैन । तर स्टेनलीको परिवार दिनरात सेटेलाइट टिभी हेरेर बस्छन् । बिजुली छैन भने कसरी चल्छ त टिभी ? तपाईं यही सोच्नुहोला । तर यहाँ बिजुलीको स्रोत नै यही टिभी भएको छ । यो नयाँ टिभी सेवालाई सुर्यको प्रकाशबाट उर्जा मिल्छ । स्टेनलीको परिवार ती परिवारमध्येको एक हो जसले अजूरी टिभीको सुरुवातदेखि नै से...